I-Beachfront Cottage, iibhedi ezi-4, ikhitshi eligcweleyo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGene
Ijikelezwe sisitiya esikhulu seentyatyambo kunye nemithi yesundu. Kuphela yi-100m/300' ukusuka kunxweme olungasese olunesanti emhlophe. I-snorkeling kunye namachibi okuqubha kufutshane. Indlu yakho encinci inikwe zonke izinto eziluncedo ozifunayo ukuyibiza ngokuba likhaya kubandakanya nekhitshi eligcweleyo. Imizuzu eyi-15 kuphela. qhuba uye edolophini (Savusavu). I-trans eluncedo iyafumaneka. Indalo ihamba ngendlela yethu yokuGcina ihlathi ecocekileyo enemijelo kwindawo yethu yeehektare ezili-116. Iihammos ezisecaleni kolwandle, igumbi lokuthuthuzela, ishawa yamanzi entwasahlobo. Yonke into ilapha!
Le Coco Cottage yeyona ndawo yethu inkulu yokuhlala eyenzelwe iintsapho.
Igumbi elinye lokulala linebhedi enkulu eneleli ekhokelela kwigumbi eliphezulu elinebhedi ephindwe kabini. (Abantwana bayayithanda!) Kukho ibhedi yokumkanikazi kwigumbi lokuhlala. Iveranda enkulu evaliweyo evaliweyo nayo inebhedi enkulu.
I-SigaSiga ibizwa ngokuba "sing-a sing-a", igama lemveli lendawo elithetha ukukhanya kwelanga.
Zonke iiholide zeSigaSiga Sands amakhaya aqeshwayo ngeeholide anikwe umyili, alayishwe ngezinto eziluncedo, acoceke kakhulu kwaye anikezelwa ngamaxabiso ohlahlo lwabiwo-mali! Awuyi kufumana enye ihotele enikezela ngendawo yokuhlala etofotofo, ixhotyiswe kakuhle, kwaye ilayishwe ngezinto ezininzi eziluncedo naphi na kufutshane neli xabiso okanye ngalo naliphi na ixabiso! Sinikezela ngeyona "bang for the buck" intle eSavusavu - zonke kwindawo apho abantu abaninzi babiza lolona lwandle lubalaseleyo eSavusavu! Zonke iiyunithi zineekhitshi ezigcweleyo zokuziphekela ezigourmet ezinezixhobo. Bonke babelana ngeendawo ezintathu zokuphumla elunxwemeni lwesanti emhlophe; ezimbini ezineshawa kunye neehammocks zangaphandle, enye inegumbi lokuthuthuzela (indlu yangasese), iindawo zokulala, kunye neempompo zamanzi amnandi asentwasahlobo. Zonke zinempepho yolwandle engaguqukiyo, umthunzi omninzi, kunye nabasebenzi abanobuhlobo bokujongana nayo yonke imfuno yakho. Abantwana bahlala bamkelekile!
Hlala elunxwemeni kwaye wonwabele izinto zangaphakathi ezitofotofo ezigcwele izinto eziluncedo ngexabiso elifikelelekayo.
Iimaski kunye neeSnorkels.
Iikayak ezi-2 enye
Ukwenza Ubisi lweKhokhothi kunye neZifundo zeOyile.
Savusavu (SVU) ukuthathwa kwesikhululo seenqwelomoya.
Idolophu yaseSavusavu Intro Tour.
Isiselo seKhokhonathi yeNdalo epholileyo eluhlaza xa ufika.
Amakhulu amathathu eemitha-ienyawo eziliwaka lesanti emhlophe engaselunxwemeni 24/7.
I-bungalow yakho kuhambo olufutshane kakhulu phezu kwengca echetyiweyo ukuya esantini.
Akukho ndlela okanye miqobo phakathi kwakho & nesanti (zilumkele ezinye iirenti zeSavusavu ezingakuxeleliyo).
Iindawo ezi-2 eziPhambili zoLounge ezineeHammocks, iiLounger, iishawari. Enye enecanopy. Enye enegumbi leComfort (indlu yangasese) kunye nezandla ezininzi ezinomthunzi.
Umlilo weBeachside kunye neLovo Pits zomlilo wasebusuku kunye nesimbo saseFijian esisemhlabathini wokupheka oveni.
I-Scuba Diving - I-2 ye-World Class Ops ngokusondeleyo iquka ukuhanjiswa kwamahhala okubuyiswayo.
UThutho oluLula w/ iiteksi ezifikelelekayo, iibhasi, iimoto ezirentwayo, iiwharfs ezi-3 ezinenkonzo yesikhephe & nezikhululo zeenqwelomoya ezi-2 (i-SVU & LBS).
Imbonakalo yoLwandle lwePanoramic.
Inkonzo Room nge okumnandi SigaSiga Indo-Fijian Cuisine (pdf menu ekhoyo. izidlo ezongezelelweyo).
Iindlela zeNdalo zityhutyha kweyethu iHlathi loLondolozo zichumile zizityalo, izilwanyana kunye nemifula.
I-Snorkeling Lagoon Imizuzu eyi-15 hamba kwindawo ephantsi kwamanzi okanye i-20 min ukuqubha kumaza olwandle.
Ichibi lokuqubha Imizuzu emi-5 hamba phantsi elunxwemeni nangaliphi na igagasi.
Amava enkcubeko kwintsimi yeCoconut enabasebenzi abanobuhlobo.
Funda indlela yokuphila yaseFiji kunye nokuba kuthetha ukuthini ukuphila ngexesha leFiji!
Ezinye iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide, iindawo zokutyela kunye neebhara ezikufutshane.
Kulula kuphela i-10 min ukuya e-Savusavu (SVU) kwisikhululo seenqwelomoya (uqhuba kancinci :-)) kunye neminye imizuzu emi-5 ukuya kwidolophu yaseSavusavu. (ezinye iirenti ziyabaxa ukusondela kwazo edolophini. Akunyanzelekanga ukuba senze njalo).
Ibekwe ngokufanelekileyo kodwa kude ngokwaneleyo ukonwabela indawo yasemaphandleni ezolileyo.
Ingxangxasi kunye noKhenketho lweAdventure kufutshane (jonga iwebhusayithi yethu ngeenkcukacha).
UMphathi woMhlali, umgcini-ndlu, uHandyman.
Isikhenkcezisi esipheleleyo/Isikhenkcezisi soMkhenkce esineetreyi zomkhenkce.
Uluhlu olubanzi lwezinto zokupheka, ikhitshi, kunye neplateware.
Iiglasi (ibhiya, iwayini, ijusi, iikomityi zekofu), iisetingi zeSilverware kwiindwendwe ezi-4-6,
Ikofu French Press / grinder, Blender, Microwave, Toaster Oven.
Iketile yamanzi ashushu, isitovu segesi.
Itafile yokutyela ehlala iindwendwe ezi-6.
Isicima-mlilo, iBlankethi yoMlilo, ikiti yoNcedo lokuQala.
Umgquba kunye nemigqomo yenkunkuma esetyenzisiweyo ngokutsha.
Ifeni enkulu yeCeiling.
IZIBONELELO NGENDAWO YOKUHLALA---
I-Intanethi ye-WiFi yasimahla (ixhomekeke kwi-w/8mbps avg spd).
Iibhedi ezitofotofo kakhulu ezinoomatrasi nemiqamelo ekumgangatho ophezulu.
Ubalo lwentambo ephezulu 100% yeelinen zekotoni.
I-picnic gear inc ice chest, iitawuli ezinkulu ezinemibala elwandle kunye nokunye.
Iifanitshala ezitofotofo kakhulu kunye nobugcisa bodonga.
Amanzi ashushu kuzo zonke iimpompo zasekhitshini kunye negumbi lokuhlambela.
Iifeni ezinkulu zesilingi kwigumbi ngalinye.
Iifestile ezikhuselweyo kuzo zonke iindonga zokujikeleza komoya opholileyo.
BBQ igesi Grill.
Inkonzo yokuHamba yaBucala iyafumaneka.
Imigca yempahla - enelanga kwaye igqunyiwe.
I-TV exhonywe eludongeni ye-LED w/Ithala leencwadi bhanyabhanya elingama-500 lasimahla.
Iziqhamo zonyaka ezincomekayo.
Itotshi/iFlashlight, 12V izibane, amakhandlela.
Imijikelo yeengcongconi kunye ne-repelent.
Ishawari yangaphandle kunye neTephu.
Amanzi amatsha eNtwasahlobo kuzo zonke iimpompo-ekhuselekile kwaye emnandi!
Umngangatho omkhulu ogqunywe yi-Ocean View kunye nesofa ye-Queen futon, itafile yokutyela kunye nezitulo.
Ishampoo, ijel yoMzimba, iDish kunye nesepha yesandla sempompa zokuhambisa amanzi zinikezelwe.
Ungeniso lweSolar Motion ukukhanya.
Ukufikelela ngokulula kumnyango wendlu yakho (izinyuko ezi-5 ukuya emnyango).
Kakade ke, iFiji idume ngokuba nobuhlobo obukhethekileyo kwabantu bayo. Ngaphandle kokucinga ngezinto eziphathekayo zehlabathi "eliphuhlisiwe", abantu balapha bonwabile kwaye banelisekile ngaphaya kokucinga kwakho! Ukonwaba, ukunceda nokwazi abanye, ukunyamekela intsapho kunye nabahlobo - yiloo nto elawula iingqondo neentliziyo zamaFiji. Uninzi lwaBakhokelo Abakhenkethi baqhayisa ngelithi abantu baseFiji ngabona bantu banobuhlobo emhlabeni. Sivuma ngentliziyo epheleleyo!
Ibhedi enkulu eyi-1, \_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 ibhedi elala abantu ababini
4.82 ·Izimvo eziyi-34
4.82 · Izimvo eziyi-34
Ijikelezwe zii-100 zeehektare zamaphandle achumileyo. Uxolo kakhulu!
Umbuki zindwendwe ngu- Gene
Kuninzi okanye kuncinci njengoko ukhetha. UMlawuli uhlala kwisiza phantse unyaka kwaye ufumaneka lula. Wamkelekile ukuba umndwendwele nangaliphi na ixesha kwindlu yakhe ekufutshane. Kananjalo sinabasebenzi abangabahlali (njengosapho ukusukela ngo-1992) abahlala kumgama omalunga neemitha ezingama-300. Silapha ukuze sikuncede nanini na. Ukanti, akunakufane wazi ukuba silapha ngaphandle kokuba usitsalele umnxeba.
Kuninzi okanye kuncinci njengoko ukhetha. UMlawuli uhlala kwisiza phantse unyaka kwaye ufumaneka lula. Wamkelekile ukuba umndwendwele nangaliphi na ixesha kwindlu yakhe ekufutshane…